बजेट सरकार र नेकपाको असफलताको दस्तावेज : डा. रिजाल
Team Khabar बिहिबार, जेठ १५, २०७७
काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटलाई नेपाली कांग्रेसले सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को असफलताको रुपमा यो दस्तावेज भएको प्रतिक्रया दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत बजेटमा नयाँ दृष्टिकोण नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘बजेट सरकार र नेकपाको असफलताको रुपमा आएको छ’ डा. रिजालले भने ‘झण्डै दुई तिहाईको बलशाली सरकारले यस्तो कठिनाईका बेला नयाँ भिजन सहितको बजेट ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो, कल्पनाशीलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।’
रिजालले सरकारले अप्ठोरमा आँखा खोल्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि ठोस रुपमा अंकमा नआएको बताए ।
अर्थतन्त्रको आकार नबढ्ने भएकाले राजश्वको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने रिजालको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘राजस्वको अनुमान संशोधित भन्दा २२ प्रतिशतले बढाउने भन्नु भएको छ, जुन यथार्थपरक छैन ।’
डा. रिजालले संशोधित १२१ अर्बबाट ३ सय अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताए । उनले लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण उठाइयो भने उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट ऋण लिन गाह्रो पर्ने बताए । ‘जसले आज संकटमा परेका व्यावसायीलार्य तङ्ग्रिने बाटो दिँदैन’ रिजालले भने ।